JESOSY, ILAY MPANALALANA. – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 juillet 26, 2013 Laisser un commentaire sur JESOSY, ILAY MPANALALANA.
“Fa Izy no fihavanantsika, Izay naha iray antsika roa tonta…”
Ny Renirano Mississipi (any Etazonia) dia toy ny hantsana goavana iray nampisaraka ny ilany atsinanana tamin’ny ilany andrefana fahizany. Niova izany tamin’ny taona 1870 tany ho any, rehefa notanterahina ny fananganana tetezana iray, asa teo ambany fitarihan’i James B. Eads, hahazoana miampita io renirano io, tsy lavitra ny tanànan’i St. Louis. Izany tetezana izany no nahatonga ny andaniny roa ho tafaray.
Toy io renirano Mississipi io ny ota, satria izy no nampisaraka ny taranak’i Adama rehetra tamin’Andriamanitra. Tany amin’ny lanitra-ny tany Andriamanitra ary ny olombelona rehetra dia tafasaraka taminy noho ny ota sy ny vokany: tsi-fanekena (na tsi-fanoavana), fihantsiana, fahafatesana. Tsy hain’ny olona samirery ny hanangana tetezana iampitana io elanelana nampisaraka io. Andriamanitra ihany no afaka hanao izany ary nataony tokoa izany. Nirahiny ny Zanany Lahitokana, ho ety amin’izao tontolo izao feno ota, ary Izy no Ilay Mpanalalana (na koa Mpampihavana) amin’Andriamanitra sy ny olona (Jereo 1Timoty 2:5). Amin’ny heviny ara-panahy, dia Izy no ilay tetezan’i Eads voalaza etsy ambony. Tamin’ny fanekeny (na fanoavany) an-tsitrapo ny lalàn’Andriamanitra sy ny niaretany ny fahafatesana izay sazin’ny ota, no nanokafany ny lalana mankany amin’Andriamanitra. Lazain’ny Fihirana amin’ny fomba tsotra izany “Nampihavanina Andriamanitra sy ny mpanota”. Ny filazan’i Paoly azy dia Andriamanitra no nampihavana izao tontolo izao taminy, amin’ny alalan’i Kristy, ary “Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan’Andriamanitra ao aminy kosa isika”. (2Korintiana 5:21)
Amin’ny finoana ny asam-panavotan’i Kristy Jesosy, dia mihavana amin’Andriamanitra isika, Izy no ilay Raintsika any an-danitra ary isika no zanany, na lahy na vavy. Amin’ny maha-zanak’Andriamanitra antsika dia mpiray tam-po isika ary miady mba hiara-monina amin’ny fihavanana. Hoy ny mpanao salamo: “Endrey, tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina” (Salamo 133:1). Isaky ny mita tetezana iray isika dia tsarovy fa amin’ny alalan’Ilay Tetezana ara-panahy natao ho antsika, dia tafaray amin’Andriamanitra isika ary isika tsirairay avy koa samy tafaray.
Publié parfilazantsaramada juillet 26, 2013 Publié dansUncategorized